कोरोना भाइरस लाग्न नदिन के गर्ने ? - VON TV
कोरोना भाइरस लाग्न नदिन के गर्ने ?
१२ माघ २०७६, आईतवार १७:३४ 486 ??? ???????
– रिया भण्डारी, काठमाडौं ।
नोवल कोरोना भाइरस संक्रमणको शंकामा अस्पताल पुगेर परीक्षण गर्नेहरु बढेका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा चीनबाट फर्किएका दुई बिरामीलाई शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसनमै राखिएको छ, एक जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
उनीहरुको लक्षण कोरोना भाइरससंग मिल्दोजुल्दो छ तर परिक्षणको रिपोर्ट भने आइनसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।
गत डिसेम्बर ३१ मा चीनको वुहानमा नयाँ भाइरस देखियो उक्त भाइरसलाई नै नोबेल कोरोना भाइरस भनेर चिनिन्छ । यो भाइरस नयाँ प्रजातिको भाइरस हो । यो पहिलो पटक मानव जातिमा पहिचान भएको हो । यसले मानिस र पशुलाई आक्रमण गर्दछ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणले डिसेम्बर ३१ यता एक चिकित्सक सहित ५६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, भने चीनमा मात्र झन्डै २,००० व्यक्ति सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ । छिमेकी मुलुकमा तीब्र रुपमा फैलिएको यो भाइरस नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ ।
चीनबाट फर्किएका ३२ बर्षीया पुरुषलाई गत शुक्रबार कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टी भएको हो । त्यस्तै हङकङ र चिनबाट फर्किएका अन्य तिन जनामा पनि कोरोना भाइरसको आशंका गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपालस्थित कन्ट्री अफिसले यो नयाँ भाइरस भएकाले यसबारे अनुसन्धान थालिएको बताएको छ । चीन बाहेकका देशमा संक्रमितको संख्या नगण्य देखिएकाले आपतकालीन घोषणा गरेको छैन ।
कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षण
–उच्च ज्वरो आउने ।
–श्वासप्रस्वासमा अत्यधिक समस्या ।
–रुघाखोकी लाग्ने, टाउको तथा जिउ दुख्ने ।
–साबुनपानीले बारम्बार हात धुने, साबुनपानी उपलब्ध नभएमा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने ।
खोक्दा र हाच्छ्यु गर्दा नाक र मुख छोप्ने ।
–फ्लु जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने ।
–जंगली तथा घरेलु पशुपन्छीहरुसँग असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने ।
–माछा, मासु र अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने ।
–मास्क लगाएर मात्र हिँड्ने ।
नेपालमा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसक्दा पनि अहिलेसम्म स्वदेशमै परीक्षण थालिएको छैन । विमानस्थलमा सतर्कता आपनाइए पनि परीक्षण प्रविधि अभावमा स्वास्थ्यकर्मी लक्षणको अवलोकन मै सीमित छन् ।